Tuuji, waa sidee sida loo sameeyay iyo waa maxay cawaaqibkiisa | Saadaasha Shabakadda
Cilmiga saadaasha hawada waxaan inta badan la kulannaa fikrado xoogaa wareersan oo noo horseedi kara inaan qalad sameyno. Mid ka mid ah fikradahan ayaa ah tan qubeys. Waxaan la kaashanaynaa roobab daran oo leh astaamo gaar ah. Ku jahwareer roobka duufaanka, roobabka, iwm. Waa wax iska caadi ah hadalka maalinlaha ah.
Taasi waa waxa maqaalkan loogu talagalay. Halkan waxaan ku xallin doonnaa shakiga ku saabsan waxa uu yahay qubeyska iyo astaamaha ugu waaweyn.
2 Kala duwanaanshaha noocyada kale ee roobka
3 Qaybaha Tuujinta
4 Kordhi maydhashada adduunka oo dhan
Waa eray u muuqda mid la yaab leh oo qaab rasmi ah loogu adeegsaday. Waxay umuuqataa mid caan ah luuqad aan rasmi aheyn ama nooc sarbeeb ah oo afka ah. Si kastaba ha noqotee, chubasco waa eray rasmi ah oo Isbaanish ah. Waxay ka timaaddaa Bortuqiiska «chuva» oo macnaheedu yahay roob. Sidaa darteed, waxaan dhihi karnaa qubeysku waa roob sifooyinkiisa gaar ah leeyihiin.
Ereygan wuxuu u dhashay si loo kala saaro cabirka roobabka ama xoojinta roobka uu da'o. Waa wax lamid ah waxa aad ugu yeeri karto qubays. Badanaa waxaa loo adeegsadaa in lagu sharaxo xaaladaha saadaasha hawada ee roobka oo si xoog leh ugu dhaca laakiin muddo gaaban. Caadiyan, roobabkan waxaa sabab u ah sameynta aagag ama xasilooni-darrada jawiga. Badanaa waxay leedahay arrimo qaarkood oo la xiriira huurka iyo cadaadiska sare ee deegaanka
Kala duwanaanshaha noocyada kale ee roobka
Farqiga ugu weyn ee ay ku leedahay noocyada kale ee roobka dheereeya ayaa ah in qubaysku badanaa u muuqdo lama filaan. Way ku adag tahay khubarada saadaasha hawadu inay saadaaliyaan marka qubayshu dhacayso. Roobka ayaa gebi ahaanba lama filaan ah Iyo, inta badan, waxay ku dhacdaa liitar aad u xun halkii mitir laba jibbaaran, laakiin waxay ku dhammaataa daqiiqado gudahood. Tani waa waxa ku adkeeya raadaarrada in la ogaado.
Waxaad inbadan ama kayar ogaan kartaa qaab kuu horseedi kara qubeys, laakiin badiyaa sax maahan. Sababtaas awgeed, waxaa caadi ah in lagu dhawaaqo warbixinta cimilada inay jiri doonaan qubeysyo iyada oo aan dhab ahaan la helin. Roobabka noocan ahi waa kuwo dagaal badan oo ku lug leh xaddi badan oo biyo ah muddo gaaban gudaheed. Sababtaas awgeed, jidadka ayaa si deg deg ah daadad ugu keena isla markaana sababi kara masiibooyinka dadka.
Cawaaqibta ugu horeysa waa burburka ama daadadka garaashyada iyo guryaha hoostooda. Haddii qulqulka qulqulka ama jiirada meesha uu ku qubeysto ay sarreeyaan, waxaa suurta gal ah inay jiidi karto gaari ama xitaa dumin karto gidaarradii hore. Waa inaan xisaabta ku darsanaa, xitaa haddii ay tahay roob da'aya waqtigiisa, xoogga iyo mugga biyaha dhaca waa kuwo aad u sarreeya. Tani waa qodobka soo bandhigaya halista ugu badan.
Roobku wuxuu sii dheereyn karaa saacado aan khatar ahayn haddii uusan si daran u dhicin. Ka soo horjeedka, roobka ugu fiican waa midka muddada dheer soconaya oo aan xoog badan lahayn, si ay u buuxiso aquifers-ka oo ay u qoyso carrada iyada oo aan waxyeello u geysan dalagyada ama dhirta.
Waxaan falanqeyneynaa astaamaha iyo qeybaha qubeyska. Markaynu u gudubno Ecuador, maydhashada ayaa marba marka ka dambaysa soo noqnoqonaysa oo caadi ah.Tani waa inay yeelaan, sidii aan horeba u soo sheegnay, maxaa yeelay waa astaamo saadaasha hawada oo la xidhiidha cimilo deggan oo diiran Jasiiradeenna waxaan ku raaxeysaneynaa jawi wanaagsan oo leh heerkul sarreeya iyo xoogaa xasilooni darro ah taas oo sababta muuqaalka ifafaalahan.
Mid ka mid ah siyaabaha lagu saadaalin karo in Roob soo socdo ayaa ah marka aan aragno samaynta daruuro aad u madow, waxay bilaabaysaa inay sameyso dabayl aad u xoog badan oo xitaa roob dhagaxyaale ah ay dhici karto. Waxay ku jirtaa xaaladahaas halka ay ka bilaaban doonaan xasilooni darrada cimilada ee u horseedi doonta qubeyska. Xaaladdaan oo kale, waxaa fiican inaad nabad noqoto, maxaa yeelay sidoo kale badanaa waxay la socotaa dabeylaha korontada.
Kadib daqiiqado kooban oo keliya, cirku wuu sii caddaadaa qorraxduna way soo baxdaa xitaa. Heerkulku badanaa wuu ka fiicnaadaa ka dib dhibicda ay ku dhacdo imaatinka ifafaalaha. Dhammaan qeybahan waxay ka dhigayaan qubeyska mid aad u fudud in la garto. Iskusoo wada duuboo, haddii aan ogaanno gobollada ay sida caadiga ah ka dhacaan, way fududahay in la saadaaliyo muddada ay sii socon doonto iyo inta jeer ee aan heli karno. Cimilada dhexdhexaadka ah, inta jeer ee ay dhacdadani ku dhacdo ayaa sidoo kale sii kordheysa.
Dhammaan waxyaabaha kor ku xusan waxay muujinayaan taas xasillooni darrada ayaa ku sii kordheysa adduunka.
Kordhi maydhashada adduunka oo dhan
Xasilooni darrada cimilada waxaa weheliya heerkul sarreeya, qoyaan yar. Isbedelka cimilada ee ka dhacaya heer caalami wuxuu kordhinayaa celceliska heerkulka meeraha. Sidaa darteed, waxaa la dhihi karaa waxay ka dhigan tahay ballaarinta kuleylaha illaa gudaha gudaha ulaha. Tani waxay u turjumi kartaa kororka suurtagalka ah ee meelaha laga yaabo inay ku yaalliin maydhasho leh astaamo la mid ah kuwa ku dhow Equator.
Tani waa sababta keentay, Isbaanishka, joogitaanka ifafaalahan roobab gaagaaban laakiin daran ay korayaan. Sida heerkulka iyo qoyaanka oo kale, sidaas oo kale ayaa la socota degganaan la'aanta jawiga. Marka, waxaan dhihi karnaa taas, maadaama ay jiraan aagag badan oo "kuleyl" leh suurtagalnimada kordhinta xasilloonida hawada, waxay sababi doontaa kororka qubayska.
Tani waa mid ka mid ah saameynta ay keento isbeddelka cimilada. Kaliya ma aha inta jeer ee dhacdooyinkan ay ku sii kordhayaan meelaha loo arko inay yihiin cimilo dhexdhexaad ah, laakiin xooggooda ayaa sidoo kale kordhin doonta. Awoodda sare waxay sababi kartaa waxyeelo intaa ka sii badan iyo qatar badan. Tan waxaan ku darnaa in qubeyska ay aad u adag tahay in la saadaaliyo, sidaa darteed waxa kaliya ee aan sameyn karno, waa in wax laga beddelo qaabeynta qorshaynta magaalooyinka si loo sii odoroso ficilka maydhashada.
Waxyaabaha kale ee aan sameyn karno waa inaan hagaajino nidaamyadeena saadaasha dhacdooyinkan si aan wax u sii odoroso oo aan cidna "ugama harin" dhacdooyinkan culus.
Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan ay ku cadahay waxa qubeysku yahay iyo astaamahiisa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Qubeyso